Henry Rider Haggard. Ndinoyeuka munyori weThe Mines of King Solomon | Zvazvino Zvinyorwa
Chivabvu 14 1925 Sir Henry Rider Haggard vakafa muLondon, Munyori wechiRungu, munyori wemabasa akadaro akakurumbira se Migodhi yaMambo Soromoni, Iye, kana Iyo Adventures yaAllan Quatermain pakati pevamwe. Ndiani asati aona shanduro dzake mumabhaisikopo kana kunakidzwa neyake yekushambadzira toni? Nhasi Ini ndinoongorora aya mabasa mukurangarira ndangariro yake.
3 Allan Quatermain naAisha
4 Mafirimu anoenderana
Akazvarirwa mukati Bradham Muna 1856, munyori wenhau wechiChirungu uyu akatanga kuwana dhigirii rake mu Mutemo muLondon uye aive zvakare mukuru wehurumende. Akararama makore mashoma muIndonesia uye Africa uye akabva adzokera kuGreat Britain, kwaakaramba achibata nzvimbo dzakasiyana siyana.
Aive shamwari yaRudyard Kipling saHaggard pachake akarondedzera muhupenyu hwake hwakaburitswa gore mushure mekufa kwake Mazuva ehupenyu hwangu. Uye vese vanogovana zvinyorwa zvavo uye zvakakosha, mukuwedzera kune misoro yepasi senge colonialism yeBritain Humambo, ipapo pakureba kwayo kukuru uye apogee. Zvakare toni neiyo exotic adventures yenzvimbo idzo.
Zvichida yakanga isiri iyo yakakurumbira uye haana kuwana mukurumbira wewaaishanda naye Kipling. Asi nyaya dzavo dzizere nemagamba akasimba, akashinga uye anokudzwa magamba uye maheroine kuwedzera ipapo mamiriro ekunze, tsananguro yetsika dzinoshamisa uye dzinoyevedza, iyo kubata kunoshamisa uye chaizvo agile rondedzero yekumhanya vachine vaverengi vakawanda.
Nhoroondo yake yekutanga yakabudirira yaive Migodhi yaMambo Soromoni (1885), rakafuridzirwa na Pfuma chitsuwa rakanyorwa naRobert Louis Stevenson. Vamwe vakaita sa Ella (1887), kuenderera kwayo, Ayesha, kudzoka kwaHer (1905) uye Iyo Adventures yaAllan Quatermain (1887).
Aive munyori yakawanda kwazvo uye inogara iripo, uyezve ndakashinga ne nhoroondo, zvematongerwo enyika uye zvinyorwa zvemabasa. Semuenzaniso iye akanyora zvakare nezve zvekurima uye shanduko yemagariro, zvichikonzerwa nezviitiko zvake mu Africa. Asi maanovel aive sei zvinopfuura zviuru zvina zvemazita, kusanganisira zvimwe zvakaburitswa nezvidimbu. Kuva nemutsauko Nada iyo Ruva (1892), Mwanasikana waMoonezuma (1893), Taundi remhute (1894), Apo nyika yakazununguka (1919) uye Bhershazari (1930). Mamwe mabhuku aakanyora aive Cleopatra, Eric Bright Maziso y Evha Mutsvuku.
Zvichida panguva iyoyo, uye pakupera kwenguva refu yeVictorian, kunyangwe zvinyorwa zvake zvaive zvinyorwa zvechiitiko, ivo vaimiririra rondedzero yakakurumbira yaishanda se propaganda yemafungiro eva impiriistia izvo zvaive zvichidzikira.
Allan Quatermain naAisha
Vatambi vayo vane mukurumbira ndivo muvhimi uye kufambisa Allan Quartermain, iyo nyeredzi munhevedzano yakanyorwa na:
Migodhi yaMambo Soromoni
Iyo Adventures yaAllan Quatermain
Allan uye Ice Vanamwari
Kana zvakadaro Iye kana ayesha, ndeimwe yeakakurumbira echinyakare mabhuku ane esoteric inobata, ane mukadzi protagonist uyo asingafi, anogara muAfrica uye anonamatwa semwarikadzi nevanozvarwa kusvikira rimwe zuva vaongorori vekuEurope vamuwana. Pairi ndeaya:
Ayesha: kudzoka kwaElla
Mavara maviri anoenderana mumusoro, Allan naElla.
Chazvino chave chichigadziriswa kune komiki ine script nemuFrench mufirimu Elie chouraqui (Maruva aHarrison, Groundhogs) uye mifananidzo neSpanish Alberto Jiménez Alburquerque.
Pasina kupokana mukurumbira ndeuyu Migodhi yaMambo Soromoni mushanduro yake ye 1950, weMetro-Goldwyn-Mayer. Inotungamirwa naCompton Bennett weEngland, yakakunda iyo Oscar yemamontage akanakisa uye akanakisa kutora mifananidzo, uye akasarudzwawo kune akanakisa mufananidzo.
Vakaita nyeredzi mariri Deborah Kerr naStewart Granger, kunyangwe paive nekuzeza pakati pake naErrol Flynn. Yakapfurwa munzvimbo dzakasikwa mu Africa. Uye inotaurira nyaya yemuvhimi uye mutungamiriri wekufambisa Allan Quatermain, uyo anogamuchira komisheni kubva kuna Elizabeth Curtis (Deborah Kerr) kuti amuperekedze kunharaunda inozivikanwa-diki kuti atsvage murume wake. Paive nedzimwe shanduro zhinji, zvese kumberi uye gare gare, asi iyo ndiyo yakasara iri yechinyakare yekunakidzwa firimu.
Kugadziriswa kwe Ella, wekutanga ari ega George Melies muna 1901. Asi chinonyanya kurangarirwa ndechekuti ndiye anotamba Ursula Andrews muna 1963, muna Mwarikadzi wemoto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Henry Rider Haggard. Ndinoyeuka munyori weThe Mines of King Solomon
Sei vanyori vachishandisa zita rekunyepedzera?